I-China XBD Series Double Suction firefighting Pump abakhiqizi nabaphakeli | IKAIQUAN
XBD uchungechunge kagesi ovundlile kabili ukuncela umlilo futha isethi kuyinto umkhiqizo lakhiwa inkampani yethu ngokuvumelana nesidingo emakethe. Ukusebenza kwayo nezimo zobuchwepheshe zihlangabezana nezidingo zepompo yomlilo ejwayelekile kazwelonke ye-GB 6245.
XBD uchungechunge kagesi ovundlile kabili ukuncela umlilo futha isethi kuyinto umkhiqizo lakhiwa inkampani yethu ngokuvumelana nesidingo emakethe. Ukusebenza kwayo nezimo zobuchwepheshe zihlangabezana nezidingo zepompo yomlilo ejwayelekile kazwelonke ye-GB 6245. Imikhiqizo ihlolwe yisikhungo sokuqapha kanye nokuhlola isikhungo sokuvikelwa komlilo kuzwelonke, futhi yadlulisa ukuhlolwa kwemikhiqizo emisha eShanghai, yathola isitifiketi semvume yokuvikelwa komlilo eShanghai.
XBD uchungechunge kagesi ovundlile kabili ukuncela umlilo futha isethi has ukucinana ukugeleza ingcindezi ezibekiweko, ububanzi uhlobo spectrum ukusatshalaliswa kanye kwabantu high. I-motor voltage inezinketho eziningi ze-380V, 6000V ne-10000v, ezingakwazi ukuzivumelanisa kangcono nokufunwa ngumlilo nokukhethwa kokuklanywa kwezitezi ezahlukahlukene nokuphikiswa kwamapayipi.
XBD uchungechunge kagesi ezingeni evulekile kabili ukuncela umlilo futha umlilo setha imikhiqizo ukufinyelela ezingeni eziholayo eziholela, nge isakhiwo ezinengqondo, umsindo ongaphakeme, ukusebenza kakhulu, ukusebenza okuthembekile nezinye izinzuzo.
Isivinini: 1480/2960 ngomzuzu
Amandla: 380V, 6KV, 10KV
Ukushisa koketshezi: ≤ 80 ℃ (amanzi ahlanzekile)
Amandla ebanga: 30 ~ 600 L / S.
Ingcindezi uhla: 0.32 ~ 2.5 Mpa
Ingcindezi yokudonsa evunyelwe enkulu: 0.4 Mpa
Langaphambilini I-XBD-DP Series Pump Fireingighting Pump
Olandelayo: XBD Series Kuqondile Axis Firefighting Pump